JUNE&MAY: ငါးဖယ် အစာသွပ်၊သုပ်၊ချက်
Posted by JuneOne at 5:22 PM
Auntie April 29, 2013 at 8:03 PM
A little housewife who is good at management!
JuneOne April 29, 2013 at 8:37 PM
Very good house wife who can manage money well. If you are working outside, you will not think for this $22 or $32. Now, this amount is so precious. It is the good point of being house wife. Keep it up !
:P April 30, 2013 at 6:46 PM
့််Home Sweet Home May 2, 2013 at 1:46 PM
Yew Tee MRT နားက Wet Market မှာ Fish Ball လုပ်တဲ့ ငါးအသားကြီးဘဲ ၀ယ်လို့ ၇တယ် ။ အိမ်ရောက်မှ ဇွန်းလေးနဲ့ ခြစ်ယူပြီးတော့ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ဂျင်း၊ ဆား နဲ့ ထည့်ပြီး ပေါက်လိုက်ရုံဘဲ ။ မြန်မာနိုင်ငံက ငါးဖယ်ခြစ်နဲ့ တော်တော်ဆင်တယ် ငါးကတော့ငါးဖယ်ငါးမဟုတ်ဘူးပေါ့ ..............း)
JuneOne May 2, 2013 at 8:54 PM
ဟုတ်လား စမ်းကြည့်အုံးမယ်။Fish ball လုပ်တဲ့ ငါးအသားလို့မေးရမှာပေါ့နော်။